Concord flyght nsogbu
Concord flyght nsogbu 2 afọ 11 ọnwa gara aga #713
Ọ dị onye nwere nsogbu na-efe efe na Concord? onye m nwetara site na nke a n'anya na-achọ igbu m .... (bounces na emee ka anya doo na akụkụ esi n'oge ụgbọ elu)
Concord flyght nsogbu 2 afọ 11 ọnwa gara aga #714
Ọtụtụ ụgbọ elu ebe a agbajiela ... ọ nweghị ihe ọhụụ. Concorde nwere ike ịdị mma, mana ọ chọrọ ọtụtụ ama. You ga-ebugharị mmanụ niile n’oge. Nke ahụ bụ naanị ụzọ ọ ga-esi kwụsie ike.
Concord flyght nsogbu 2 afọ 11 ọnwa gara aga #716
Ee ha agbajiri ha na ha bụ Airbus! LOL M na-aṅụ iyi na ahụrụ m ọtụtụ ihe gbasara nsogbu na ọdụ ụgbọelu ụgbọ elu karịa na m nwere Boeing
Concord flyght nsogbu 2 afọ 10 ọnwa gara aga #720
Ibe !!!! know ma ka usoro nnyefe mmanụ si arụ ọrụ? M nwara iwere ya na enwere otutu ile anya na itughari uche ... enwere akwukwo igu akwukwo?
Concord flyght nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #947
Okwu ndị ahụ bụ anụmanụ dị iche iche niile, dịka ihe atụ nke ụgbọ elu sonic dị egwu. Ekwesịrị ịgbakọ etiti nke ike ndọda. Ekwesịrị ịtụle ịdị elu, ebe akpụkpọ anụ ahụ na-eji oke ọsọ ọsọ ejiri ọkụ. Gbakọọ ndị na-ebufe ibu na akpa ga-agbada gị ike ndọda. Gụọ usoro n'usoro. Mụọ maka ụgbọ elu. Enwere njehie mkpọtụ ụda n'ụgbọ elu ahụ siri ike na ntị n'ụdị egwu egwu agbagọ. Onye okike tinyere faịlụ a na folda ụda ụgbọelu na ndudue. Iji kpochapu ya, mepee folda ụda ma gaa nyocha ụda ruo mgbe ịchọtara egwu egwu ahụ na-adịghị mma, wee pịa pịa ma hichapụ ya, ihe niile dị mma.
Oge ike page: 0.213 sekọnd